छोराहरुलाई पाल्न सक्छस् भने पाल सक्दिनस् भने छतमा लगेर त ल झा’रिदे ! – Dainik Sangalo
छोराहरुलाई पाल्न सक्छस् भने पाल सक्दिनस् भने छतमा लगेर त ल झा’रिदे !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २९, २०७८ समय: ११:३३:११
पोखराकी यि महिलाका श्रीमान करिब ६ वर्ष देखि स, म्पर्कमा छैनन् । उनले अर्कैसंग विवाह गरेर जा भन्ने जवाफ दिएर सम्पर्क विहिन भएका हुन् । उनीहरुले प्रेम विवाह गरेका थिए । निमकुमारी घर्ती अहिले पनि श्रीमानलाई सम्झेर रोइरहन्छिन् । कुरा गर्नु अघि नै उनको आँशु आउँछ । संगै हुँदा पनि तिमी पातली भयौ, नराम्री भयौ म अब सुन्दर र अलि मोटी युवती विवाह गर्छु भन्थे । माथिल्लो जातको विवाह गर्छु भनेर चे,तावनी दिने गर्थे ।
उनी नेपालमै छंदा पनि अन्य युवतीको पछि लाग्ने गरेका थिए । अहिले पछिल्लो ३ वर्ष देखि दुवई गएपछि स, म्पर्क वि, हिन भएका छन् । उनले ३ वर्ष अघि मेरो छोरालाई घरमा लगेर राखिदे तँ उमेर हुँदै अर्को केटासंग विवाह गरेर जा भनेर भनेको बताइन् । त्यस यता उनीहरुको स,म्पर्क भएको छैन ।
Last Updated on: August 13th, 2021 at 11:36 am